Ny tsipika Cut To Length izay ampiasaina amin'ny famolahana, fametahana ary fanesorana ny coil metaly amin'ny halavan'ny takelaka fisaka sy ny fametahana azy. Mety amin'ny fanodinana vy mangatsiaka sy mafana mihodina, coil, coil vy nandrisika, coil vy vita amin'ny silikon, stainless coil vy, coil aluminium sns ho sakany hafa arakaraka ny fitakian'ny famokaran'ny mpampiasa ary hokapaina ihany koa.
Miara-miasa amin'ny orinasa lozisialy malaza manerantany, manome antoka ny fandefasana voalohany.
St stainless-vy Sodina fanaovana milina Series no tena nampiasaina tamin'ny famokarana fantsom-by vy indostrialy. Amin'ny fivoaran'ny teknolojia fantsom-by, ny fantsom-by vita amin'ny vy tsy manara-penitra dia nanolo ny fantsom-piraingo tsy mitongilana amin'ny faritra maro (toy ny simika, ny fitsaboana, ny famokarana divay, ny diloilo, ny sakafo, ny fiara, ny rivotra, sns.)
Masinina ERW Tube & Pipe Mill andian-dahatsoratra no fitaovana manokana hamokarana fantsom-pandefasana fantsom-pandrefesana mahitsy matetika ho an'ny fantsom-pandrosoana sy fantsom-pandrosoana indostrialy miaraka Φ4.0Φ273.0MG ary ny hatevin'ny rindrina F0.2～12.0 MG. Ny tsipika iray manontolo dia mety hahatratra ny avo lenta sy haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny famolavolana fanatsarana, ny safidy tsara indrindra amin'ny fitaovana, ary ny famoronana sy ny horonana marina. Ao anatin'ny refin'ny savaivay sy ny hatevin'ny rindrina, azo ovaina ny hafainganam-pamokarana.